IDYLLE MAISO - I-Airbnb
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguAnnamaria
Njengoko ivumba leerozi zasendle lisamkela iindwendwe kwintendelezo egcadwe lilanga, kuyacaca ukuba oku kurhoxa okuqaqambileyo okunekhethini ezimhlophe, ezinomsinga kunye neendonga zelitye likalika epitomize i-Accogliente, okanye ububele bokwenyani.
Loo mvakalelo yentlalontle yamkelwa ngakumbi yindawo enomtsalane ye-Idylle Maison. Ijonge iinduli ezahlukeneyo, inika umbono opholileyo kunye nohendayo wesibhakabhaka esimenyezelayo seMatera esinemiqolomba engaqondakaliyo.
Ke phumla kwintendelezo, kwaye wonwabele ukukhanya okukhazimulayo.
Kubonakala ngathi incanyiswa ziinkwenkwezi ezimhlophe ezibengezelayo ezisondela phezulu, i-Idylle Maison yimvisiswano ehambelanayo yelinen ezimhlophe-ezinomtsalane, impahla yendlu, ikhabhathi ephangaleleyo kunye neebhedi ezitofotofo-zonke zikhazimla ubukhazikhazi obumhlophe obufana nelitye elinqabileyo elibonisa ukuzola okuhlaziyayo kwale ndlu izimeleyo ngokupheleleyo. .
I-hip kodwa inqandekile, ivuselela inkanuko kodwa isebuhle ngenxa yobuncinci bayo, i-palette yemibala enomtsalane, le ndawo izolile, inika ithuba lokulala iindwendwe ezintathu ngokukhululekileyo. Apha phakathi kwentaphane yeentyatyambo ezizukileyo, izityalo zemveli, kunye nezixhobo zokhuni ezikhethwe ngokufanelekileyo, ukuthotyelwa kwabakhenkethi kusoloko kuyeyona nto iphambili—nokuba oko kuthetha ukubanika eyona mfihlo inkulu, okanye ukunikela ngeyona nkonzo ibalaseleyo ukuze bancede bafumane eyona nyaniso. ubuncwane baseMatera.
Kwesi sixeko sakudala sisukela kwi7000 B.C. ingaphezulu lee kunemiqolomba yesassi, iindawo zokutyela ezinobubele, nentaphane yezinto ezenziwayo—ukusuka kwiiklasi zokupheka, iWellness, nokutyelela ioli yomnquma—nto leyo umamkeli-ndwendwe aya kuzilungiselela ngovuyo.
Luthando kunye nemfihlakalo, indawo enxilisayo eyongezelelwa ngakumbi yindlu edibanisa ifanitshala yeHlabathi eliDala kunye neealcoves ezikhanyiswe ngamakhandlela kunye negumbi lokuhlambela lale mihla kunye nokunye ukuchuma okunencasa kwemeko yala maxesha enomtsalane.
I-Idylle Maison ngokuqinisekileyo ingaphakathi elikhanyayo kunye ne-airy kunye ne-aura engapheliyo. Ikwanomtsalane, umbono womamkeli wento eya kuhlala ixesha elide isenza uMatera abe yinkumbulo exabisekileyo neyonwabisayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Annamaria
Indoda enexesha elide ehlala eMatera, umamkeli-ndwendwe uyazi ngokucacileyo apho bufumaneka khona “ubuncwane obufihliweyo” besixeko. Ke musa ukuthembela kulo mamkeli-zindwendwe ukuba anikezele ngenkonzo yokuthatha simahla kwisikhululo sebhasi okanye sikaloliwe. Qiniseka ukuba ezona ngcebiso zibalaseleyo ziya kunikwa malunga nokufumanisa eyona ndawo intle yokutyela eMatera, indlela yokuphonononga ngcono izitrato zedolophu ezifana ne-maze, imiqolomba, iilwandle ezikufutshane, kunye ne-trulli edumileyo kwiPuglia engummelwane. Lo nguMazantsi e-Italiya, kwaye uhlala ehlonipha izithethe zawo zokubuka iindwendwe ezifudumeleyo, umamkeli-zindwendwe uya kulungiselela ukhenketho lwasekhaya lommandla-kwaye ngokuqinisekileyo, ngokwesiko, ukwamkela abahambi ngokukhathalela ubumfihlo babo, kunye nomdla onyanisekileyo.
Indoda enexesha elide ehlala eMatera, umamkeli-ndwendwe uyazi ngokucacileyo apho bufumaneka khona “ubuncwane obufihliweyo” besixeko. Ke musa ukuthembela kulo mamkeli-zindwendwe uku…